Beesha Caalamka oo War cusub kasoo saartay Doorashada Jubbaland (Akhriso) – Idil News
Beesha Caalamka oo War cusub kasoo saartay Doorashada Jubbaland (Akhriso)
Qoraal ay si wadajir ah u soo saareen qaar kamid ah dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya iyo ururo sida Canada, Ethiopia, European Union, Finland, Germany, Italy, Kenya, Netherlands, Norway, Sweden, Turkey, Uganda, United Kingdom, United States, AMISOM,IGAD iyo Qaramada Midoobay ayaa markale ku baaqay in doorashada Jubbaland ay noqoto mid loo dhan yahay.
Beesha Caalamka ayaa waxa ay qoraalkan ku sheegeen inay dhammaan dhinacyada quseysa Jubbaland ay ku dhiirigelinayaan inay gaaraan heshiis mid ah oo ku saabsan hal geeddi-socod doorasho oo lagu kalsoonaan karo, loo dhan yahay, cadaalad ah iyo nabad ah
“Waxaan ka walaacsanahay Maqnaanshaha heshiiskaas inuu suura geliyo inay kororto xasilooni darro iyo kala qeybsanaan reer Jubbaland.”ayaa lagu yiri qoraalka.
“Ka hor dhacdooyinka la qorsheeyay 22ka Agoosto 2019, waxaan ugu baaqeynaa dhammaan daneeyayaasha in ay ka fogaadaan ficil kasta oo sababi kara rabshado. Waxaan soo dhoweyneynaa dadaallada AMISOM ay ku abuureyso deegaan aamin ah oo ka jira Jubbooyinka”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka
“Ammaanka iyo xasiloonida Jubbaland uma ahan oo kaliya muhiim Jubbaland balse waxa ay tahay mid suurtogelinaysa in horumar kale laga gaaro arrimaha Siyaasada, dhaqaalaha iyo amniga dalka Soomaaliya.”ayaa lagu sheegay qoraalka.
“Waxaan soo dhoweyneynaa dadaallada AMISOM ay ku abuureyso deegaan aamin ah oo ka jira Jubbooyinka, waxaanan dhiirigelineynaa isku xirnaanta ciidamada dhulka jooga. Waxaan ku boorineynaa dhammaan daneeyayaasha in ay la shaqeeyaan hanaan dowladnimo” ayaa ugu dambeyntii lagu yiri War-saxaafadeedka kasoo baxay Beesha Caalamka